China Tapered mqengqeleki iibheringi mveliso kunye nabenzi | Kancinci Yong
Ukongeza kuthotho lweetriki, iibheringi ezijikelezileyo ezinamathele nazo zikwanothotho lwesiNgesi. Iikhowudi kunye nobukhulu beetriji zemetriki zihambelana nemigangatho ye-ISO, kwaye iichungechunge zaseBrithani zihambelana nemigangatho ye-AFBMA.
Iibheringi mqengqeleki Tapered babe nezakhiwo ezahlukeneyo, ezifana umqolo eyodwa, umqolo kabini kunye nemiqolo ezine iibheringi mqengqeleki tapered. Ukuthintela ukutyibilika okutshabalalisayo phakathi kwe-roller kunye ne-raceway ebangelwa ngamandla e-inertia xa ukuzala kuhamba ngesantya esiphezulu, ukuthwala kufuneka kuthwale umthwalo othile.
Ukuzaliswa kwe-tapered roller kulungele ukuthwala umthwalo we-radial, unidirectional axial load kunye nomthwalo odibeneyo we-radial kunye ne-axial. Umthamo womthwalo we-axial weebheroli ze-tapered roller kuxhomekeke kwikona yoqhakamshelwano α, okt i-engile yomjikelo wendlela yomdyarho. Ubukhulu be-engile yokunxibelelana α, ubukhulu bomthwalo we-axial umthwalo.
Umqolo Single ethwele mqengqeleki ethwele
Olu hlobo lokuthwala lunokunciphisa ukufuduka kwe-axial kwe-shaft okanye iqokobhe kwicala elinye kwaye kuthwale umthwalo we-axial kwicala elinye. Ngaphantsi kwesenzo somthwalo osisigxina, i-axial component force iya kuveliswa, ekufuneka ilungelelaniswe. Ke ngoko, kwizincedisi ezibini zeshafti, iibheringi ezimbini kufuneka zisetyenziswe ubuso ngobuso okanye ukubuyela umva ngasemva.
Umqolo kabini ethwele mqengqeleki ethweleyo
Iringi yangaphandle (okanye iringi yangaphakathi) iphelele. Ubuso obuncinci bokugqibela bemisesane yangaphakathi (okanye amakhonkco angaphandle) ayafana, kwaye kukho isithuba phakathi. Ukucoca kuguqulwa bubungakanani bendandatho yesikhala. Olu hlobo lokuthwala lunokuthwala umthwalo we-radial kunye ne-bi-directional axial load ngexesha elinye. Inokunciphisa umda wokufuduka kwe-axial ye-bidirectional ye-axial okanye yeqokobhe ngaphakathi kuluhlu lwe-axial clearance range of bearing.
Imiqolo ezine roller tapered ethwele
Ukusebenza kwale hlobo ethwele ngokusisiseko iyafana naleyo kumqolo kabini ethwele mqengqeleki ethwele, kodwa unako ukuthwala umthwalo engaphezulu kunokuba umqolo kabini tapered ethwele, kodwa isantya umda sisezantsi. Oku ikakhulu kusetyenziswa koomatshini enzima ezifana lokugaya rolling.
I-Fossa inoluhlu olubanzi lweebheringi ze-roller, kubandakanya izinto ezinokutsalwa, ezenza kube lula ukulungelelanisa kwisicelo.
Olu hlobo lokuthwala lusetyenziswa ngokubanzi kwi:
IiHubhu zezithuthi ezilula, zeshishini nezolimo
Unikezelo (transmission kunye umahluko)
Isixhobo Machine yokuluka
Egqithileyo Iibheringi roller ukulenza
Okulandelayo: QYBZ Deep Groove Ball Ukunikela I